आफूविरुद्ध लगाइएकाे १४ आरोप प्रमाणित गर्न गणेश थापाकाे कर्माछिरिङलाई चुनाैती - नीलकण्ठ एफ.एम.
ससाहा मोटरसाईकल दुर्घटना अपडेट : घाईते सन्तोष अधिकारीको मृत्यु
धादिङको १३ वटै पालिकाहरुमा मतगणना जारी, विवरण आउन सुरु
अध्यक्ष उप्रेतीको पहिलो निर्णयः सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स फ्रि देखि मतदाता बराबरको बृक्षारोपणसम्म
धादिङमा ११ वडाको नतिजा : कांग्रेसले ४ जित्दा एमाले, माओवादी र समाजबादीले कति ?
धादिङको निर्वाचन अपडेट : गल्छीमा एमाले, बेनिघाटमा काग्रेस अग्रस्थानमा, रुबिभ्यालीमा गठबन्धन र राप्रपा बराबरीमा
धादिङको २३ वडामा मतगणना सकियो:माओवादी केन्द्रको अग्रता(हेर्नुहोस कहाँ-को निर्वाचित ?)
आफूविरुद्ध लगाइएकाे १४ आरोप प्रमाणित गर्न गणेश थापाकाे कर्माछिरिङलाई चुनाैती
८१ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ बैशाख २८, बुधबार (२ हफ्ता अघि)
काठमाडौं, २८ वैशाख।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले आफूविरुद्ध लगाएको १४ आरोप प्रमाणित गर्न हालका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई चुनाैती दिएका छन् ।
बुधबार ललितपुर स्थित एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले आाफूमाथि लगाइएका आरोपमध्ये १४ वटा प्रमाणित गर्न छिरिङलाई चुनाैती दिएका हुन् । आफूमाथि लगाइएकाे आरोप प्रमाणित गर्न नसके कर्माछिरिङ एन्फा र फिफाको नियमअनुसार कारबाहीको भागेदारी हुने थापाकाे चेतावनी छ ।
१५ वर्ष सँगै व्यवस्थापनमा रहेका कर्माछिरिङले आफू प्रति लगाएको आरोप प्रेस विज्ञप्ति र भिडियो क्लिपमार्फत थापाले सार्वजनिक गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा थापाले शेर्पाले विभिन्न अनलाईन तथा टिभीमा थापाविरुद्ध दिएको अन्तर्वार्ताकाे क्लिप थापाले सार्वजनिक गरेका हुन् । थापाले कपोल्कपित आरोप लागेको र त्यो आरोप प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनाैती दिए ।
‘उहाँले लगाएका कपोकल्पित आरोपहरुका कारण आम फुटबलप्रेमीमा फिफाले मलाई कारवाही गरेको तर त्यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाँही सफाई दिएको भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । त्यसकारण अब यो विवादको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
म र मेरो परिवार अब लामो समयसम्म मानसिक पीडामा बसिरहन चाहन्नौं । यसअर्थमा अब उहाँसँग दुई विकल्पमात्र बाँकी छन् । उहाँले ममाथि लगाएका आरोपहरु प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ त्यसो भए म कार्बाही भोग्न तयार छु । अन्यथा एन्फा विधानको धारा ८ र फिफाको कोड अफ इथिक्सको आर्टिकल ५८ को बुदा नम्बर ३ अनुसार उहाँले काबाही भोग्नुपर्छ ।
एन्फा र फिफाको विधानअनुसार पनि कुनै निर्दोष व्यक्तिउपर कुनै निराधार आरोप लगाउन पाइन्न । कसैमाथि लगाएको आरोप झुठो सावित भएमा आरोप लगाउनेमाथि कारबाही हुने फिफा कोड अफ इथिक्समा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ,’ थापाले भने ।
थापाले आफूविरुद्ध लागेको आरोप १४ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन्ः
१. गोल्ड प्रोजेक्टअन्तर्गत आएको १९ लाख डलर एन्फाको अडिटमा नदेखाएको तथा नगरपालिकाहरुले दिएको रकमहरु पनि अडिटमा नदेखाएको र ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको
२. एन्फामा फिक्स डिपोजिटमा जम्मा गरिएको आठ करोड रुपिया गैरकानुनी तरिकाले जम्मा गरेको र गैरकानुनी तरिकाले एन्फाको रकम व्याजमा लगाएको
३,. एन्फालाई आएको रकम आफ्नो श्रीमती र छोराहरुको नाममा राखी अनियमितता गरेको
४. खेलाडी कल्याण कोषमा जम्मा गरेको ५० लाख रुपयाँको स्रोत नखुलेको
५. साथी भन्ने संस्थालाई १ लाख ५० हजार डलर दिएको
६. एन्फाको रकम ३२ प्रतिसतमा व्याजमा लगाएको
७. रंगशालामा दर्शकबाट उठेको २८ करोड रुपैयाँ एन्फाको खातामा जम्मा नगरेको र अडिटमा नदेखाएको
८. सार्वजनिक लेखा समितिले ५८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको
९. कतार फुटबल संघले ८ लाख डलर दिएकोमा एन्फाको खातामा २ लाख हजार डलरमात्र जम्मा गरेर अन्य रकम हिनामिना गरेको
१०. एएफसीबाट प्रशिक्षकलाई आएको रकम अडिटमा नदेखाएको
११. साफ च्याम्पियनसिपको दौरानमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा जम्मा ८५ लाख मात्र एन्फाको अडिटमा देखाएको र आर्थिक हिनामिना गरेको
१२. भ्रष्टाचार गरेको ६० करोड रुपैयाँ खेलाडी कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने र मलाई जेलमा हाल्ने
१३. अरेन्ज प्रोजेक्टर सुनामी प्रोजेक्टमा समेत संलग्नता रहेको
१४. एन्फा कम्प्लेक्स आफ्नै साधन स्रोतबाट बनाउँदा नेपालमा एउटा २ करोड १८ लाखको हिसाव देखाएको तर फिफामा करिव ३ करोडको हिसाव पेश गरेको र त्यसमध्येबाट ४० लाख रुपैयों खेलाडी कल्याण कोशमा हालेर करिव ६० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको
निर्वाचन आयोग बूढीगंगा नगरपालिकाको विवाद टुङ्ग्याउन अनिर्णित
तालमेलप्रति असन्तुष्ट यादवसँग ओली भेट अर्थपूर्ण